10 kasị inweta obodo na Europe aha
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Inweta njem nleta » 10 kasị inweta obodo na Europe aha
Inweta njem nleta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime anyị ga-achọ ịga ụwa, ọ naghị adị mfe mgbe niile maka ndị nwere obere agagharị ma dabere na enyemaka ndị ọzọ.
Inweta njem bụ isiokwu a na-arụ ụka, mana ọtụtụ obodo ndị dị na Europe ka ga-agbanwe ebe ha na-aga ma mee ka mmadụ niile nwee ike iru ya.
N'iburu nke ahụ n'uche, ndị ọkachamara njem amụọla ebe nkiri - gụnyere akara ngosi ihe ngosi na ebe ngosi ihe mgbe ochie - ụgbọ njem ọha na ụlọ na ụlọ oriri na ọ inụ mostụ na obodo ndị kacha eleta na Europe iji debe obodo ndị kachasị dị na Europe.
Kacha inweta njem nleta na-adọrọ mmasị
Ndị ọkachamara amụọla ebe nkiri iri na ise kachasị elu maka obodo ọ bụla dị na Europe, na-enyocha nnweta oche nkwagharị ha, ma enyemaka dị na mma ahụ, ebe a na-adọba ụgbọala, njegharị nkọwa na ụlọ mposi ndị emegharị iji akara obodo ọ bụla.
Nnyocha ahụ chọpụtara na ụdị nke London Buckingham Obí, Guinness Storehouse na Dublin na Louvre Museum na Paris bụ ụfọdụ n'ime ebe nlegharị anya kachasị na Europe.
The Top 10 Kasị inweta obodo na Europe
2. Vienna, Ọstrịa
4. London, United Alaeze
6. Milan, .tali
8. Rome, .tali
London na Dublin na-eduga ụzọ maka ebe nkiri dị
Dịka e kwuru n'elu, nnweta niile - dabere na ịdị mfe nke nnweta maka ọtụtụ ebe nlegharị anya, ụlọ oriri na ọ andụ restaurantsụ na njem ọha na eze - na Dublin na-akụda obodo ndị ọzọ dị na Europe, dị ka nyocha ahụ si dị.
Agbanyeghị, isi obodo UK, London, na-ewere ọnọdụ kachasị elu maka ọnụ ọgụgụ nke akara ngosi na ebe ngosi ihe mgbe ochie, na Dublin na-abịa na njedebe nke abụọ. Mmasị nke Buckingham Obí na Towerlọ Elu nke London, ihe ijuanya, bụ ebe kachasị adọrọ mmasị na obodo ahụ. London nwetara akara nke 319 isi maka nnweta maka ebe nkiri, ma e jiri ya tụnyere nke Dublin nke 286. Agbanyeghị, London tụfuru akara mgbe ọ bịara n'ụgbọ njem ọha.
Vienna, ọkachasị, nwekwara ọtụtụ ihe na-enye ndị njem na-agabigaghị ije. Emegharịrị ọtụtụ n'ime ebe nkiri ndị ama ama iji hụ na ha nwere ike ịnweta kpamkpam - dịka Hofburg na Schonbrunn Obí na Gardens, malite na 1400s na 1700s n'otu n'otu. N'otu aka ahụ, 95% nke usoro metro Vienna akwụghị ụgwọ, yana enyemaka dị maka onye ọ bụla nwere obere mbugharị.
Prague na-abịa ebe ikpeazụ maka ịnweta ebe nkiri
Ọ bụ akụkọ ọjọọ nye ndị na-aga Prague. Ndị ọkachamara ahụ chọpụtara na ọmarịcha akara ngosi ihe ngosi na ebe ngosi ihe mgbe ochie dị na Prague bụ opekata mpe nke obodo ndị kacha eleta na Europe. Ọtụtụ ebe nkiri anaghị enye ohere ịnweta oche ọlụsị ma ha niile enweghị ebe ị na-adọba ụgbọala ma ọ bụ dị nso maka ndị ọbịa nwere nkwarụ.
Accessiblegbọ njem ọha na-abanyekarị maka ndị njem
N'ihe banyere njem ọhaneze, Dublin, Vienna na Barcelona nọ n'isi ndu. Usoro Dublin Luas zuru oke maka ndị ọrụ niile. Otú ọ dị, ọ dị mwute ikwu na isi obodo Britain, London, nọ n'ọnọdụ nke abụọ iji mee njem maka ọhaneze - ọ tụrụ n'anya n'ihi ọnụ ọgụgụ nke ebe nlegharị anya dị n'obodo ahụ.
Kwa afọ, ihe karịrị otu ijeri ndị njem 1.3 na-agba otu n’ime akara ngosi London a ma ama. Agbanyeghị, dịka otu n'ime ọdụ ọdụ ọdụ ụgbọ ala kacha ochie n'ụwa, ọ bụkwa otu n'ime ebe anaghị enweta ya. Ọ bụ ezie na TFL ekwuola na ha na-achọ imelite netwọkụ ahụ, ọ gaghị adị oge ọ bụla maka mmadụ ruru nde 1.2 n’oche nkwagharị, bi n’obodo ahụ.
Vienna na Barcelona chịkọtara ụzọ atọ kachasị maka ụgbọ njem ọha
Ọ bụ ezie na Paris Metro erubeghị n'ụkpụrụ nke ụgbọ njem Luas nke Dublin, Vienna na Barcelona abụọ emeghewo ụzọ maka ọtụtụ ebe ndị ọzọ dị na Europe - na-abata na ọnụ ọgụgụ abụọ na atọ n'otu n'otu.
A na-etokarị Vienna maka ịnweta ya, yana 95% nke ụlọ ọrụ U-bahn na S-bahn nwere ike ịnweta kpamkpam. Ọ bụghị ihe ijuanya na Vienna abanyela n'ime obodo iri kachasị eleta na afọ gara aga.
Barcelona tinye ebe nke atọ n'ozuzu nnweta maka njem ọha, yana 91% nke ọdụ ụgbọ ala dị maka ndị njem niile. Agbanyeghị, nnweta nke ebe nkiri Barcelona bụ nke abụọ kachasị njọ, naanị Prague. Ihe akara ngosi akụkọ ihe mere eme, dịka La Sagrada Familia na Parc Guell, ka ga-emelite.
Paris na-ehichapụ ala maka ịnweta njem ọha na eze
Paris bụ ebe ama ama na-ebutebeghị nnweta ụzọ dị ka obodo ndị ọzọ dị na Europe. Isi obodo France na-abịa ebe ikpeazụ maka ịnweta njem ọha na eze, yana naanị 22% nke ọdụ (65 n'ime 302) nwere ike ịnweta mmadụ niile.
N'agbanyeghị nke a, Paris Metro kwesịrị ịbụ otu n'ime ọdụ ụgbọ oloko kachasị mfe nke Europe iji kwalite dịka ndị mmepe. Ná nkezi, ọdụ ụgbọ ala Metro dị ihe dị ka mita isii n'okpuruala - ma e jiri ya tụnyere nke London, nke dị mita 25 n'okpuru ala.
London nwere ike ịbụ obodo European kachasị eleta na afọ gara aga (dị ka Euromonitor International), mana nnweta nke ala na ala ga-adabakọ na ọnọdụ ya. London, ihe itunanya, edobere nke abụọ ka ọ gafee maka ị nweta njem ụgbọ njem ọha na eze - warara Paris Metro.
Ndị ọkachamara achọpụtala na naanị 29% nke ọdụ ụgbọ oloko London na-enye ndị na-enweghị ohere ohere ịnweta, yana naanị 52% nke ọdụ ụgbọ okporo ígwè ga-enwekwa ike ịnweta na London Overground. N'iji ya tụnyere, Dublin sụgharịrị usoro Luas tram zuru oke enwere ike ịnweta.
Accessiblelọ nkwari akụ kachasị dị
Ndị ọkachamara ahụ amụọkwala ụlọ nkwari akụ ise kacha elu n'ime obodo ọ bụla, dabere na Tripadvisor, ma chọpụta na London na Dublin ọzọ, dị elu maka ịnweta. Berlin bụkwa mgbakwunye na ndị isi atọ.
London, Berlin, Milan na Dublin na-eduzi ụzọ maka ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelsụ ndị nwere ike iru
Mgbe ha nyochara ụlọ nkwari akụ ise kacha elu na obodo Europe ọ bụla, ndị ọkachamara ahụ chọpụtara na London, Berlin na Dublin nọ n'isi oche maka ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelsụ. London batara na mbụ na 28% nke ụlọ nkwari akụ na nkwari akụ ise kacha elu (dị ka Tripadvisor) nwere ike ịnweta maka mmadụ niile, na Berlin nke abụọ (27%), Milan nke atọ (19%) na Dublin nke anọ na 11%.
Ma Vienna na Barcelona na-enye ọtụtụ ụlọ nwere ike ịnweta (10% n'otu n'otu), jikọtara ya na usoro njem ha nke ụfọdụ n'ime ndị kacha mma na Europe.
Agbanyeghị, dị ka nyocha anyị si kwuo, ụfọdụ obodo ndị na-enye ụgbọ njem na ebe nkiri kachasị, anaghị etu ọnụ maka oke osimiri dị mfe.
Poland na-enye osimiri kacha enweta
N'ụzọ dị ịtụnanya, Poland na-enye ụsọ osimiri nwere ike ịnweta kpamkpam na Europe karịa ebe ọ bụla. E nwere osimiri 20 dị na mba ahụ nke na-enye osimiri na mmiri maka ndị mmadụ nọ n'oche ndị ngwọrọ, yana ịnweta mmiri maka ndị anya ha na-adịghị mma.
Uzo nke abuo maka aha nke osimiri kacha enweta bu Spain, na-enye aja aja aja iri na abuo nke ndi nile nwere ike inweta. Spain na-ekwupụtakwa ụfọdụ ụgbọ njem ọhaneze kachasị maka ndị chọrọ enyemaka, na Barcelona na-achịkọta atọ anyị kacha elu maka ịnweta na metro.
Placestali bụ ebe nke atọ maka oke osimiri kachasị dị mfe, yana 11 dị maka ndị nwere obere mbugharị ma na-ahụ ụzọ.
Otú ọ dị, UK dị n'azụ ụmụ nwanne nna ya na Europe, na-enye osimiri anọ nwere ike ịnweta kpamkpam, nke dị na South: Porthtowan, Sandy Bay, Bournemouth, Southbourne Beach na Margate Main Sands.
O di nwute, enwere otutu uzo iji gaa otutu obodo Europe, ma site na ịnweta ụdị isiokwu a na-arụ ụka, anyị nwere ike ịhụ mgbanwe n'omume na nso nso.